ShweDream.TV presents popular Myanmar TV shows including music videos. Our extensive library will be updated with weekly TV shows and our selection of interesting Myanmar videos.
Watch your favorite movies any time for free.
News and Articles in Health, Celebrity, Entertainment and Business
နန်းဆုရတီစိုးက ပါရမီရှင်အဖွဲ့နဲ့ ဖိုးချစ်နှစ်ပါးသွားကဖို့နဲ့ ဇာတ်ကားနှစ်ကားရိုက်ဖို့အတွက် ဇူလိုင်လထဲမှာ စင်ကာပူကိုသွားမှာ ဖြစ်ပြီး၊ စင်ကာပူမှာ တစ်လလောက်နေဖြစ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ပြည်ပခရီးစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက် ဗီဒီယို .....
Category: Music & FilmRead more
အယ်လ်လွန်းဝါက ဇွန်လအကုန် လောက်မှာ အမေရိကကို နှစ်လကြာဖျော် ဖြေရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁ဝ မြို့နဲ့ ၁၅ မြို့လောက်ဖျော်ဖြေရမှာဖြစ်ပြီး၊ ပွဲအနေနဲ့က လည်း အနည်းဆုံး ၁၅ ပွဲလောက် ဖျော်ဖြေ ရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
၂ဝ၁၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ရက်နေ့တွင် ကျ ရောက်မည့်’မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့’အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့က စီစဉ်တင်ဆက် သော ”မြတ်နိုးဖ .....
Category: Health & BeautyRead more
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အချိန်တွေ များစွာကို ရင်းပြီး ကျော်ဖြတ် ကြိုးစား ကြရတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိမှာပါ။ ကြိုးစားမှု လုံ့လ ၀ီရိယ ရှိရင် ဘယ်အရာမဆို အောင်မြင်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ချင်းပြည်နယ်ကနေ ရန်ကုန်က .....
Category: FashionWatch this
Category: General / NewsWatch this